Madaxweyne Donald Trump ma wuxuu ka maseyray gabadhan yar? - BBC News Somali
13 Disembar 2019
Lahaanshaha sawirka Times Magazine
Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twiter-ka kusoo qortay in Greta "ay qabto dhibaato la xiriirta xakameynta caradeeda", loona baahan yahay in ay aflaanta madadaalada la daawato saaxiibadeeda.
Wiil uu dhalay madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay qoraal u muuqday in uu kaga xun yahay qaabka loo maray soo xulista shakhsiga ugu saameynta badan sanadkan ee Times Magazines, waxaana uu su'aal geliyay go'aanka joornaalka uu ku aqoonsaday Greta.
"Times waxaa uu ka tegay dadka ku dibadbaxay Hongkong ee u dagaalamayay xorriyad iyo noolal, waxaana uu abaalmariyay ilma yar oo loo adeegsananyo suuq geyn", ayuu ku qoray bartiisa Twitter-ka.
Maxkamad xukuntay in Trump uu jabiyay dastuurka Maraykanka
Sidoo kale bishii Oktoobar ee sanadkan, waxay Greta badeshay xogta shakhsiyadeed ee Twiter-keeda, kadib markii Madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin uu ku tilmaamay in ay tahay "qof naxariis leh, balse si khaldan wax loogu sheegay.